Thiago Silva oo ku amaanay Kylian Mbappé waxqabadkiisa wanaagsan ee kooxda PSG – Gool FM
Thiago Silva oo ku amaanay Kylian Mbappé waxqabadkiisa wanaagsan ee kooxda PSG
(PSG) 13 Feb 2019. Hogaamiyaha kooxda Paris Saint-Germain ee reer Brazil Thiago Silva ayaa amaanay saaxiibkiisa Kylian Mbappé, kadib bandhiga cajiibka ahaa uu ka sameeyay PSG.
Thiago Silva ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyka “Le Parisien” wuxuu ku sheegay:
“Mbappé waa ciyaaryahan aad muhiim inoogu ah, xitaa marka ay kooxda ku sugan yihiin labada xidig Cavani iyo Neymar”.
“Da’ada Kylian Mbappé ma noqon karto 20 jir, balse da’adiisa waxaa la dhihi karaa waa sida 28 ama 29 jir, sababtoo ah waa waxaan la rumeysan Karin da’ada uu jiro iyo qaab ciyaareedka uu sameenayo”.
“Ka hor inta aan la ciyaarin Manchester United, kulakii lugta hore wareega 16-ka ee tartanka Champions League, waxaan kala hadlay isaga wax yar ee ku saabsan waxa uu rajeynayo, muhiim ma ahan inaan cadaadis saarno, sababtoo ah dadka waxay ka sugayaan inuu bixiyo kulan cajiib ah”.
Si kastaba Mbappé ayaa xalay ku hogaamiyay kooxdiisa PSG inay guul kaga gaarto Saint-Etienne kulankoodii 25-aad ee horyaalka France – Ligue 1, kadib markii uu dhaliyay goolka kaliya ee ciyaarta ka dhashay.
Bayern Munich oo u soo duushay Inigiriiska ka hor kulankeeda habeen dambe ee Liverpool....(Boateng oo laga soo tagay iyo Ribery oo...)+SAWIRRO